सान्ता क्वेस्ट 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
अघिल्लो खेल: ट्रिक फिलि .. ..
अर्को खेल: रंगहरूको टावर ..
सान्टाको दुर्घटना भयो! उसले आफ्नो बाटो र सबै उपहार हरायो। सडक टाईल्स स्लाइड गरेर पथ बनाउनको लागि उसलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्नुहोस्। क्लासिक पजल खेल जुन यो सुन्दा कडा छ! मास्टर गर्न तीन मोडमा स्तरहरूको टन। आफ्नो कौशल परीक्षणमा राख्नुहोस् र सान्ता साहसिक कार्यमा सामेल हुनुहोस्! जब तपाईं अड्किनुहुन्छ, स use्केत प्रयोग गर्नुहोस्। के तपाइँ चुनौतीको लागि तयार हुनुहुन्छ?
#पर्चीसाहसिकसाहसीexmasमोबाइलक्रिसमसकोउपहारउपहारहरूस्लाइडिंग पजलसन्तसान्टा क्लाउजsantas